Ngaba i-AirTag inokuphinda isethwe kwakhona? Kuthekani ukuba ndiyifumene okanye ndifuna ukuyithengisa? | Ndisuka mac
Ngaba i-AirTag inokuphinda isethwe kwakhona? Kuthekani ukuba ndiyifumene okanye ndifuna ukuyithengisa?
Eli tyala limalunga nemibuzo eliqela enempendulo efanayo, into yokuqala ekufuneka uyenzile ukuseta kwakhona i-AirTag kukususa i-ID ye-Apple yomnini elifanelekileyo. Ngaphandle koku qhubeka ukuba akunakwenzeka ukusebenzisa isixhobo esifunyenwe esitratweni, esithengisiweyo okanye esifanayo.
Njengazo zonke iimveliso zeApple ukuba sifumana enye yezi AirTag emhlabeni, ubhaka, isipaji, amaqhosha ... kwaye asifuni kuyibuyisela kumniniyo. Siya kuba nakho ukusebenzisa ibhetri yayo Kuba ezi zixhobo zinxulumene ne-ID ye-Apple kwaye ke ngaphandle kwayo akunakwenzeka ukuzisebenzisa.
U-Apple uthi ngokucacileyo kulo mhlathi:
I-AirTag inokudityaniswa ne-ID ye-Apple. Ukuba ufuna ukusebenzisa i-AirTag esetyenziswe ngomnye umntu, kuqala susa i-AirTag kwi-ID yakho ye-Apple. Ukuba umsebenzisi wangaphambili uyisusile i-AirTag kwi-ID yakhe ye-Apple, kodwa ibingaphandle kweBluTag yeBluetooth, kuya kufuneka uyisete kwakhona ngaphambi kokuba uyisebenzise nezixhobo zakho
Oko kuyathethwa ungayicwangcisa njani i-AirTag
Njengazo zonke izixhobo zeApple ezi AirTags zinokuseta kwakhona okanye ukuseta kwakhona, Ngoku kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Cinezela ezantsi kwisembozo sebhetri sentsimbi esingenasici se-AirTag kwaye ujike ngasekhohlo
Susa isiciko kunye nebhetri, emva koko ubeke ibhetri kwaye uvale kwakhona
Cinezela phantsi kwibhetri de uve ibhiphu
Xa isandi siphela Phinda le nkqubo amatyeli amane: susa kwaye ubeke ibhetri endaweni yayo, emva koko ucinezele ibhetri de uve ibhiphu. Kuya kufuneka uve isandi ngalo lonke ixesha ucinezela ibhetri, izandi ezihlanu zizonke
Buyisela ikepusi ngokulungelelanisa iithebhu ezintathu kwiphepha kunye neendawo ezintathu zokubeka kwi-AirTag
Cinezela ezantsi kwisiciko ude uve isandi
Jika ikepusi ngokungqinelana newotshi ide iyeke ukujika
Ngale ndlela sele ubuyisile okanye usete kwakhona i-AirTag kodwa uyikhumbule loo nto ukuba inxulunyaniswa nesazisi se-Apple kuya kufuneka usicime ngaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ngaba i-AirTag inokuphinda isethwe kwakhona? Kuthekani ukuba ndiyifumene okanye ndifuna ukuyithengisa?
I-TSCM, umthengisi we-Apple, uya kwakha ukuya kwiinkxaso-mali ezi-6 eArizona (USA)